Ogaysiis Muhiim ah oo ka Yimid Kormeeraha Guud Joe Gothard
Qoysaska SPPS ee Qaaligahow:
Waxaan qormadan u qorayaa inaan idinla wadaago waxa soo kordhay oo ku saabsan ballanqaadkeenii ahaa in Iskuulada Saint Paul ay ardaydu dib ugu noqon doonaa sidii caadi ahayd. Shalay, Gudoomiyaha Gobalka Walz wuxuu ku dhawaaqay tilmaamo cusub oo u oggolaan doona Iskuulada fasalada hoose inay bilaabaan soo dhaweynta ardayda iyo shaqaalaha sida ugu dhakhsaha badan Isniinta, Janaayo 18. Tani waa war wanaagsan, waxanan bilaabi doonaa inaan cusbooneysiino qorshayaasheena inaan sida ugu dhakhsaha badan uguna nabadgalyada badan ee suurto galka ah ugu bilowno ardaydeena waxbarashadii caadiga ahay ee arday walba inuu Iskuulka aado ahayd.
Gudoomiyaha Gobalku wuxuu ku celiyay Qorshihii Amminga Waxbarashada Safe Learning Plan oo qeexayay in Iskuulada hoose ay ardayda koox-koox u soo celiyaan, iyada oo aan laga badinaynin in markiiba la soo celiyo seddex fasal. Markaas ka bacdi, fasalada kale ee la soo celinayaa waa inay u dhaxaysaa labo-todobaad kuwii hore loo soo celiyay.
Si aan wakhti ku fian u siino qoysaska, macalimiinta iyo shaqaalaha Iskuulku waxay qorshaynayaan isbadelkan, iyada la tixgalinaayo xisaabtana lagu daraayo muhiimmada caafimaadka iyo nabad qabka, waxaan qorshaynaynaa inaan ardayda sidii caadiga ahayd ee ardaygu iskuulka u aadi jiray caadi ahaan ku soo celino Isniinta, February 1, annaga oo ka bilaabayna ardaydayada da’da yar-yar.
Isniinta, February 1, ardaydan soo sosocata ayaa waxbarashadoodii qofahaaneed ee caadiga ahayd si buuxda ugu soo noqon doona iskuuladoodii:
Dhamman ardayda fasalada Pre-K ilaa 2aad
Dhamman ardayda ku jirta waxbarashada gaarka ah min sabiga ilaa fasalka 2
Ardayda ku jirta waxbarashada gaarka ah ee barnaamijyada fedraalka ah ee gaarka ah ee looyaqaano (Special Education Federal IV) sida xarumaha Downtown School (JDC), care & treatment program, hospital program, Bridge View, Focus Beyond (Pathway 1 & 2), River East and Journeys
Talaadada, February 16, ardayda fasalada 3 ilaa 5 ayaa waxbarashadoodii qofahaaneed ee caadiga ahayd si buuxda ugu soo noqon doona.
Tan waxay khusaysaa dhamman iskuuladeena hoose, waxase laga yaabaa in ay kkala duwanaadaa iyada oo ay ku xidhan tahay iskuulada. Qoysasku waxay heli doonaa warbixinta dheeraadka ah ee ku saabsan iskuulkooda marka faahfaahfinta la xaqiijiyo.
Macalimiinteena iyo shaqaalaheena, wakhtigan kala guurka waxa iyaguna jiri doona:
Todobaadka January 18: waxaa shaqaalaha ka shaqada kala guurka u diyaar ah inay iska baadhaan COVID-19. Baadhitaanadani COVID-19 waxay diyaar u yihiin shaqaalaha inay labadii todobaadba mar iska qaadaan oo iska baadhaan cudurka COVID-19.
Todobaadka January 25: Macalimiinta iyo shaqaalaha kale ee iskuulku waxay sii wadi doonaa qorshihii lagu fulinayay kala guurka.
Ardayda Fasalada Pre-K ilaa 5aad, oo ay ku jiraan ardayda qaadata waxbarashada gaarka ah ee ah heerka fasaladaas, ee raba inay ku sii jiraan waxbarashada durugsan inta sannad dugsiyeedka ka hartay waxaa la wediisanayaa inay isku diiwaan galiyaa Waxbarashada Durugsan ee Iskuulka Virtual Learning School ugu danbayn Jimcaha, January 8, haddii aanay horeba u samaynin.
Haddii sababta ogaysiiskani ay bedashay nooca waxbarashadii aad rabtay, fadlan la xidhiidh Waaxda Meelaynta Ardayda (Student Placement Center at 651-632-3764).
Ardayda Iskuulada Sare (Fasalada 6 ilaa 12) hadda waxay ku sii jiri doonaa waxbarashada Durugsan (distance learning). Waxaan ka shaqaynaynaa sidii aanu caawin lahayn ardayda iskuulada Dhexe iyo kuwa Sare kuwooda laga yaabo inay dib uga dhacayaan waxbarashadii laga rabay. Tan waxa ku jira fursad cusub oo ay ardayda ku liidata fasalku ay ku heli doonaa waxbarasho qof-qof ah oo lagu caawin doono iskuulkooga. Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka ayaa soo bixi doonta marka fasaxa qaboobaha laga soo noqdo.
Waxbarashada Durugsani way nagu wada adkayd dhammanteen (Distance learning). Waxaan ku faraxsanahay inaan caadigii ugu soo noqon doono waxbarashada, waxaan idiin balan qaadayaa inaan idin la socodsiiyo waxale wixii cusub marka faahfaahintu soo dhammaato. Haddase, waxaan qoysaskiina u rajaynayaa inay fursad u helaan qaboobahan inay caafimaad qab ku waaraan, ayna wakhti isla qaataan xubnaha qoyska ee isjecel, iyo aniga oo idiin rajaynaya iskuul ku soo noqo wanaagsan sannadka cusub.
Aniga oo ku hadlaya magacayga, magaca Gudiga Guurtida Waxbarashada iyo kan shaqaalaheena hawl-karka ah, waxaan idiin rajaynayaa dhammantiin caafimaad iyo farxad xilii fasaxeedkan. Waad ku mahadsantihiin inaad kalsoonidiina nasiiseen.